Ukusetyenziswa kweeMatshini zeLaser ze-CO2 zeCandelo elingelilo Metal-iGolide Laser
IZicelo ze-Laser ze-CO2
Ukuthetha ngokwahlula-ulwelo oluqinileyo, amalaphu eefilitha kubalulekile ekusebenzeni kwamanzi. Umatshini wethu wokusika we-laser okhethekileyo wenziwe ngokunyaniseka ukudala ubungakanani obufanelekileyo babo nabuphi na ubungakanani beefilitha zokucoca.
Ukusika kunye nokubhoboza i-airbags, inkqubo yokusika i-laser inezibonelelo ezibonakalayo ngokuthelekiswa nenkqubo yokusika ukufa komatshini. Ukulungiswa kwe-laser isebenzisa indlela yokuphanda ishushu. Akukho kuncamathela kwizinto.
Ngokungafaniyo noninzi lwezixhobo ezingenzi ntsimbi, izinto zokugquma zifuna ukusebenza ngokukuko kunye nokuqina. I-Laser sesona sixhobo sokusika ngobuhlobo kwindalo.
Uncedo oluninzi lokusebenzisa i-air duct yonyusa imfuno yoko. Ukuchaneka kunye nokusebenza okuphezulu kokusikwa kwe-laser kunokwenza lula iinkqubo zokulungiswa kweendwangu.
Abathengi abasukela iimpahla ezenziwe ngabantu zezona zinto zikhoyo. Sebenzisa umatshini wokusika we-laser ukusika iilaphu zealwear ixesha lakho kwaye uhlangabezana neemfuno zeemveliso ezenziwe ngokwezifiso.
Inkqubo yokuphelisa i-laser ye-GOLDEN LASER yenzelwe ukuba igqitywe ilebheli, yitekhnoloji ye-laser yokusika kumgca eguqula ukuqhuba okufutshane kunye nomsebenzi ophakathi ngokuthembekileyo nangokufanelekileyo, ukwazi ukuqhubekeka ukujikeleza komsebenzi ngokwamanani.
Izisombululo zesikhumba zeGolide kunye nezihlangu, ezixhonywe kwinkqubo yokulawula isantya esiphezulu, ukudibanisa iipateni, kunye nokufumana isidlo kunye neminye imisebenzi kunye netekhnoloji ye-laser engenakuthelekiswa nanto yokutshintsha izixhobo zokusika ...
Izisombululo zeshishini elungisa izinto zegolide yeLaser zenzelwe ikakhulu ukuveliswa kwebatch encinci, ukusika kunye nokulungelelanisa, ukulungelelanisa ilaphu, kunye nokunxiba impahla ekhawulezayo ...